Iyo Apple TV + akateedzana "Nheyo" ichave ine 80 zvitsauko | Ndinobva mac
Iyo Apple TV + "Foundation" yakateedzana ichave iine zvitsauko makumi masere
Pasina mubvunzo avo vanotonga mukati Apple paki ivo vari gehena-vakatsunga kugadzira Apple TV + chikuva chikuru. Uye nekufamba kwenguva vachabudirira. Ingori nyaya yechishuwo nemari. Uye hapana kana chimwe chezvinhu zviviri chisipo.
Mubvunzurudzo nemumwe wevagadziri venhevedzano «hwaro"Akatsanangura kuti parizvino vari kupfura pachitsuwa cheMalta, uye kuti sainzi ngano dzinova nezvikamu makumi masere. Inotaridzika zvakanaka, pasina kupokana.
Mwedzi mishoma yapfuura takashambadza , que Apple TV + anga achitanga kutora firimu pane yesainzi yekunyepedzera kugadzirwa. Nhepfenyuro inokatyamadza yakavakirwa pamabhuku aIsaac Asimov ane musoro unoti "Nheyo".
Iye zvino tava kuziva zvishoma nezvake. Iri kupfurwa pachitsuwa cheMalta, uko vazhinji Game of Zvigaro zvoumambo vakatopfurwa. Neapo David goyer, mumwe wevagadziri vemitambo, akapa hurukuro inonakidza kwazvo ipapo.
Anotsanangura kuti kunyangwe hazvo vaine matambudziko mazhinji nekuda kwedenda, nguva yekutora mifananidzo iri kubva pasimba kuenda pasimba. Akataura zvakare kuti "Game of Thrones yainyatso kuve yekutanga yeaya makuru hofori emitambo uye iwe unoziva kuti ikozvino neSiseko tinogona kutaura nyaya, netariro pamusoro penzira Zvikamu gumiMaawa makumi masere, pachinzvimbo chekuyedza kuzvinyudza zvese mumaawa maviri kana matatu eimwe bhaisikopo.
Kutora mafirimu pane zvakateerana kwatanga kuMalta Film Studio, uko Apple ichashandisa matangi makuru emvura pachitsuwa ichi kugadzira nyika yemumwe mutorwa. Kutora mafirimu kuchaitikawo kune dzimwe nzvimbo mu chitsuwa cheMarita, kusanganisira Fort Manoel.
Zviripachena, ichiri muchikamu chekutora mafirimu, tisingazive fungidziro yemusi wekutanga kwayo. Asi zvingangoita gore rino, paApple TV +, hongu. Kana vakaenderera seizvi, pakupedzisira ini ndinofanira kunyorera kuchikuva kana yangu yemahara kunyoreswa kwegore kunopera. Ndiri kuzviona zvichiuya ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Iyo Apple TV + "Foundation" yakateedzana ichave iine zvitsauko makumi masere
Zuva reValentine, MacBook Pro bhatiri kutsiva chirongwa uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac